Xukuumadda Oo Shaacisay In Wada hadaladii Somaliland & Soomaaliya ay dib uga furmayaan Turkiga | Salaan Media
Home Wararka Xukuumadda Oo Shaacisay In Wada hadaladii Somaliland & Soomaaliya ay dib uga...
Hargeysa (SM)- Wasiiirka Arrimaha dibada iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar, ayaa shaaca ka qaaday in wada hadaladii hore ugu bilaabmay Somaliland iyo Soomaaliya mar kale dib uga furmayaan dalka Turkiga muddo laba todobaad gudahood ah.
Wasiirku waxa uu sidaasi ka sheegay shir jaraa’id oo uu caawa ku qabtay xarunta madaxtooyadda Somaliland.
Wasiirka Arrimaha dibaddu waxa uu sheegay inay marti-qaad rasmi ah ka heleen dawlada Turkiga isla markaana ay ka qeyb geli doonaan wada hadaladaasi oo uu tilmaamay inay yihiin qaar waxtar u yeelan doona qaranimada Somaliland.
“Waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo in dawladda Turkiga oo la saaxiib ah labada dawladood ee Somaliland iyo Soomaaliyaba iskaashi iyo xidhiidhna la leh labada geesoodba inay ku marti-qaaday labada dal inay dib u bilaabaan wada hadaladii hore u dhex-maray.labada geesood-na arrintaasi way soo dhaweeyeen,”ayuu yidhi Wasiirka Khaarajigu.
Wasiirku waxa uu intaasi ku ladhay “Waxaan markaa qaadanay in labada dawladood ay muddo aan ka badnayn laba todobaad gudahood aanu ku wada hadalno dalka Turkiga, si loo sii ambo-qaado arrimihii berigii hore wada hadalka laga yeeshay.”
“Waxaan markaa jecel nahay inaanu shacbiga Somaliland iyo beesha caalamka ee kaleba sidaasi ku war-gelino in aanu dal ahaan annagu marti-qaadkaas Turkiga aqbalay oo aanu jecel nahay in wada hadalkii hore u bilaabmay la sii wado, si aanu himilada qarankani leeyahay aanu u gaadhi karno,”ayuu yidhi Dr. Maxamed Cabdilaahi.
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Sida laga war-qabo beesha caalamku waxay ku baaqday kal-hore in labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan oo ka wada hadlaan mustaqbalkooda siyaasiga ah iyo iskaashiga labada dal dhex mari kara. Intaasi ka dib waxa labada dal bishii June ee sanadkii hore ay ku yeesheen Ingiriiska wada hadalkii ugu horeeyay muddo 21 sanadood ah, waxaanay ku heshiiyeen in qaabka loo wada hadlayaa ay noqoto qaab laba geesood ah, Somaliland oo dhinac ah iyo Soomaaliya oo dhinaca kale ah. Waxa ku xigay wada hadalo ay magaalada Dubia ee dalka Imaaraadka ku yeesheen madaxweynaha Somaliland iyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, waxaanay isku raaceen in la sii ambo-qaado wada hadalada bilowga ah.”
Xukuumadda Somaliland ayaa hore u sheegtay inaanay ka qeyb gali doonin shirka London lagu qabanayo bisha May ee fooda inagu soo haysa, waxaanay ku doodeen in aanu shirkani wax masaalix ah ugu jirin Somaliland, balse uu yahay shir caalamka kaalmo iyo taageero dhaqaale loogu waydiinayo dawladda Soomaaliya.